Tottenham ayaa soo afjartay xalay guulihii xiriirka ee Chelsea Premier L, kaddib markii ay ku suul daartay 2-0. – Cayaaraha dunida
Tottenham ayaa soo afjartay xalay guulihii xiriirka ee Chelsea Premier L, kaddib markii ay ku suul daartay 2-0.
Tottenham ayaa soo afjartay xalay guulihii xiriirka ee Chelsea Premier kaddib markii ay ku suul daartay 2-0.
Da’yarka reer England ee Dele Alli ayaa looga mahdinayaa labada goolba uu kala dhaliyay dhammaadka qeybtii hore iyo bilowga qeybta labaad.
Tababare Antonio Conte ayaa ammaanay Tottenham isagoo sidoo kale xiddigihiisa ugu baaqay inay aqbalaan guul darada.
“Waan ogeyn inay tani dhici karto hadda ka horba,” Conte ayaa sidaa u sheegay Sky Sports.
“Waxaan aaminsanahay inaan arkay kulan isku dheeli tiran. Gool ayay dhaliyeen dhammaadka qeybtii hore ee ciyaarta intaa kaddibna waxay dhaliyeen goolkii labaad innagoo ku jirna waqtigeenii ugu fiicnaa.
“Waa murugo inaan joojino guulihii xiriirka ahaa, laakiin Tottenam waa koox fiican, dhabtii koox xoogan waxaana aaminsanahay hubaashii inay ka mid yihiin kooxaha u tartami kara horyaalka ilaa dhammaadka.
“Way dagaalameen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay hubaashiina Tottenham way dagaalami karaan sanadkan sidoo kale.
“Labo koox oo fiican oo leh quwad iyo cadaadis fiican ayaa isku dayday inay kulanka ku adkaato. Tottenham ayaa dhalisay labo gool waqti qariib ah, gaar ahaan qeybtii labaad kolkaa aan khasaarinay labo fursadood aan ciyaarta ku bar-bareyn karnay